Muxuu daaranyahay baaqa Maayarka Hargeysa? | Berberanews.com
Home WARARKA Muxuu daaranyahay baaqa Maayarka Hargeysa?
Hargeysa-(Berberanews)-Maayarka Caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa baaq u diray dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeys, kaasoo la xidhiidha inaanay ku dhexmilmin xasaasiyadda doorashada Shirguddoonka Golaha Wakiillada oo kal-fadhigooda koowaad loo ballansanyahay berri.
“Anigoo ah Maayarka Caasimadda Hargeysa, waxa maalinta berri ah ku beegan kalfadhiga koowaad ee Golaha Wakiillada ee cusub, insha alaa waxay shirkooda ku qabsan doonaan gurigooda si nabada, waxaanan rajaynayaa inuu ugu bilaabmo, uguna dhamaado nabad.
Shacabka Hargeysa ahina waxay si nabad ah ay qabsan doonaan hawlahoodii, una shaqo tegi doonaan si nabad ah, qofkastaana baylahdiida ayuu tiri doonaa magaalada Hargeysa gudaheed.
Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland shacabkeeda waxaa u sharaf ah inuu ku yaaalo Guriga Golaha Baarlamaanka Somaliland, intii ay Somaliland jirtayna gurigaas waxa ka dhcy kulamo fara badan oo ay yeesheen Golaha Wakiillada iyo Guurtidu dhammaantoodn waxay ugu qabsoomayeen si nabad ah.
Waxaa inoo soo baxay Doorasho ay inoogu soo baxeen goleyaal deegaan oo cusub xubno baarlamaan oo cusub oo muddo dadka reer Somaliland ay sugayeen, waa guul ay Somaliland gaadhay dhinaca dootashooyinka, waa dhammaystir dootashooyinkii ka baaqday ee qabsoomi waayay oo u qabsoomay. Waa wax dadka reer Somaliland ay adduunka ugu faani karaan.
Sidoo kale magaalada Hargeysa waa magaalo nabdoon oo ay dadkeedu nabada jecelyihiin, waxaan ranaynayaa shacabka reer Hargeysa maalinta berri ah inay manadooda u ilaashadaan siday u ilaashan jireen, asxaabta qaranka waxaa u furan doodo siyaasadeed oo nabadgelyo ah, sidoo kalena Golaha Wakiilada iyo Guurtida waxa iyana u furan doodo uga dhex dhac guryahooda, doodaha baarlamaanka ka dhacayaa maaha inay bannaanka Hargeysa u soo baxaan, baarlamaanka Somaliland ee Wakiiladuna wuxuu metelaa dhammaan degmooyinka Somaliland oo dhan, Hargeysana waxay magaalooyinka kale dheertahay in guriga Baarlamaanku ku yaalo, doodaha iyo doorashada dhexdooduna waxay qabsoomayaan iyagoo madaxbannaan, waxaanay ku qabsanayaan gurigooda” ayuu yidhi Maayar Cabdikariin Axmed Mooge.
maayar cabdikariin axmed mooge
Previous articleGuddida Dacwadaha Cashuuraha oo hawlgal shaqo ka wada Berbera
Next articleFaysal Cali-waraabe oo wax lala yaabo ku sifeeyay eedaha wasiir Kaahin